Daawo:- Somaliland oo si jeesjees ah kaga jawaabtay Codsigii MD Deni “SSC waa dhulka Sland wadahadalna kama galayno”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Somaliland oo si jeesjees ah kaga jawaabtay Codsigii MD Deni “SSC waa dhulka Sland wadahadalna kama galayno”.
Daawo:- Somaliland oo si jeesjees ah kaga jawaabtay Codsigii MD Deni “SSC waa dhulka Sland wadahadalna kama galayno”.
August 19, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 2
Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Cabdillaahi (Indho-indho), oo ka mid ah Golaha Guurtdida ayaa ka hadlay Wada-hadal nabadeed oo uu ku baaqay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdillaahi Deni, Wada-hadalladaas oo uu doonayo in Somaliland kala yeesho Muranka xuduudka.
Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Cabdillaahi (Indho-indho) ayaa isagoo Arrimahaa ka hadlaya wuxuu yidhi “Nabadgalyada uu ku baaqay ayaanu soo dhaweynaynaa, Cid diidi kartaana ma jirto, Annagu dhinacayaga iyo deegaan ahaan wax kasta oo nabadgalyo lagu helayo diyaar baanu u nahay.”
Xildhibaanku wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay Puntland kala shaqeeyaan Nabadgalyadooda, maaddaama buu yidhi Colaaddu ku badan tahay dhulkooda “Waxaanu jecelahay inaanu ka wada-shaqayno oo aanu weliba iyaga ka caawino (amniga), Waayo? iyaga dhulkooda Colaaddaa ku badan, Ciidankaygu waa heegan oo iyaga ayuun buu meelahaa ka eeg-eegaa ee sida kale wuu u shaqo la’yahay..” ayuu yidhi, laakiin wuxuu shaki ka muujiye Wada-hadal uu Somaliland ugu baaqay Madaxweynaha Puntland “Ta Wad-hadalka, waxaanu leenahay waxbaa ku jira.”
DEG DEG+AKHRISO: Axmed Karaash oo qaaday talaabo lama filaan ah, Si adagna u garaacay Deni.
Maxay tahay sirta ku qarsoon sababta wasiir Isloow uu shaqada kaga eryay agaasimihii wasaaradaasi.
Kaasi waa waxba yahay,cid buu matalaana lama oran karo, dadka meesha ka taliyaa war laga sugayaa wax woqooyi laga baryayaa ma jiraan, hadey hadliwaayaan isaaq, hede meeshiisi ayuu dagaalku ka soconayaa.
Kkk Xildhibaanku jawaabtaa uu bixiyay ayaanu anaguna hanaanu Reer Somaliland oo dhan nahay ku ayid sanahay.
Xildhibaankaas Golaha Guurtida ku jira ayaa kun jeer ka awood badan Karaash oo ah ku xigeenka Waraabe u taaga ah ee Budhleyn.
Nabada cid walbaa u baahan. Somalilandna dhulkeeda cidna kala gorgortami meyso. Hadey Budhleyn si nabad ah uga guranweydo, waa laga saarayaa. Imika waxa socdaa waa sulux. Dagaalna iyadoo laga maarmi waayo mooyaane lagu degdegi maayo. Somaliland Budhleyn waxey u damaanad qaadeysaa oo ay guarantii usiineysaa iney Caasimadeeda Garoowe u nabad geliso, waa hadey Budhleyn aqbasho iney faraha kala baxdo dhulka Somaliland oo ay joojiso fadqalalada iyo tashuushka ay meelaha qaarkood ka wafo ama abuureyso.